Ireo olona mijanona any ivelany: Irina avy any Danemark - Ny LAHATSARY amin'ny CHAT #1 - hitsena ny zazavavy, na lehilahy online!
Ireo olona mijanona any ivelany: Irina avy any Danemark
Fa lahatra nanampy manova ny safidy
Fotoana maro lasa izay, dia nahita ny sasany mikasika ny tantara momba Irene ny zavatra tovovavy ireo, zavatra trano ho an'ny sembanaTsy afaka ny handalo ny mahafinaritra fa mampalahelo sary avy amin 'ny fiainan' ny olona autiste ao Danemarka, tena tiako ity gazety ity, ary avy eo, ny mamirapiratra, mavitrika ary misokatra ny mpampiantrano Ira.
Nanontany aho hoe: Irina mba hamaliana fanontaniana vitsivitsy tsy momba ny tao Danemarka, kanefa ihany koa ny mikasika ny fomba izany Nora rehefa manao ny fanapahan-kevitra ny handao ny firenena.
Isika rehetra dia manana ny antony isan-karazany, fa ny tantara Irene, toy ny Susie avy any Finland, dia ho tena mahaliana, tahaka ny amin'ny mandrakariva ny fanontaniana voalohany ny momba anao. Firy taona ianao, aiza ianao teraka sy lehibe, taiza ianao no mianatra ao Danemarka? Aho Mihevitra aho fa tsy io no voalohany tamin'ny resadresaka teo amin'ny fiainako, ary izaho koa te-hanatrika io anjara toerana io, noho ny aminareo, Oksana. Aho sivy amby roapolo taona, ary izaho ho fankalazana ny fitsingerenan'ny andro amin'ny volana vitsivitsy) aho no teraka, ary lehibe tany Omsk, any an-tanànan'i Ibera, eo an-tsisin'ny ny jeografia. Nandeha ara-dalàna ny sekoly, ary izany dia afa-tsy ny roa taona farany izay nandeha tao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa, izay nanapa-kevitra ny hanao inona izy fa tena mahaliana - ny fianarana fiteny vahiny. Rehefa vita ny fianarako teny amin'ny lise, dia niditra tao amin'ny sampan-Draharahan'ny teny vahiny tao amin'ny normal University ary nahazo ny diplaoma ho toy ny mpampianatra ny teny malagasy sy ny teny frantsay. Tsy miasa matihanina, toa tsy ho ahy, ary nahita ny asa amin'ny maha-mpandika teny amin'ny fanambadiana sampan-draharaha, izay niasa aho talohan'ny nandehanako ho any Danemark. Ahoana no voalohany fantatro fa ianao te-hiala Danemark? Fanontaniana tsara, mino aho fa indrindra indrindra mikasika ny faniriany hiala Omsk, dia tsy tanteraka ny tanànako, raha azonao atao ny milaza izany. Tamin'izay fotoana izay, tsy nahafantatra aho fa tsy tiako izany, fotsiny aho, tsy te-hiaina tsy misy ary amin'ny olona rehetra ao.
Aho dia efa nieritreritra fa, mba mandehana any Copenhague, aho, dia nandeha misy im-betsaka ao anatin'ny volana vitsivitsy, ary nijery.
Nahoana ianao no mifidy olon-kafa izany ao Danemarka? Tsy mifidy Danemark amin'ny loza, ny fotoana voalohany dia ny sophomore amin'ny Oniversite, dia tiako fotsiny ny fomba fanao amin'ny teny anglisy, ary ny alalan ny Internet aho dia niafara tamin'ny zavatra fianakaviana. Nahoana Danemark? Dia nifidy ny toerana izay misy ny vitsy kokoa ny heloka bevava, izay misy fahamarinan-toerana sy ny fiadanana. Ny fotoana voalohany aho fa tsy hiala izy, dia raiki-pitia, ary nanapa-kevitra rehetra am-pony hijanona any Florence. Fa ny faharoa dia ny fotoana sisa dia misaotra ny namana avy any amin'ny Oniversite, izy no miasa ao aminy manoloana ny asa mpiara-miasa amiko, ary izaho koa nahita anarana fianakaviana. Raha toa ka tsy ho fantatrao momba ny namany, avy eo ny fandaharana noho ny fianarana ny fomba fiteny sy ny kolontsaina, ary ny firenena samy hafa dia ny fahafahana hiaina ao amin'ny fianakaviana sy ho tonga olona iray ao amin'ny fianakaviana, fanampiana amin'ny ankizy sy ny an-trano. Dia ho sarotra ny handamina ny lasa sy ny personalize ny havana noho ny hifindra? Izao toa ny fikambanana ny lasa dia vita amin'ny blink-maso. Nandeha tany Ity in-droa, nanolotra ny antontan-taratasy amin'ny Masoivoho danoà, ary avy eo dia naka visa. Tena tsara ny zavatra renibeny nandray ny tafatafa, nanontany ny momba ny tanjon'ny diany sy ny drafitra. Ary ny tapakila dia efa misy, ary tamin'ny volana janoary, ny roa-polo taona lasa izay, dimy taona lasa izay, dia tonga tao amin 'ny Fanjakan' Danemark.
Nahita ny havany dia tsy sarotra, dia nanao izany mora kokoa ho ahy, ary koa ny drafitra sy ny zava-misy fa izaho mitady hatrany mba namela Danemark.
Ny reniko mbola indraindray manontany ahy raha te-hiverina, saingy mihevitra aho fa vao reny. masìna ianao, lazao amiko izay dia ny fahatsapana voalohany ny zavatra. Maro loatra ny hevitra, angamba satria tonga any Eoropa, ny zavatra rehetra dia mahagaga fa tsara tarehy sy tsy mahazatra. Tsaroako koa, ohatra, rehefa tonga izy ary nankany amin'ny seranam-piaramanidina ao Copenhague. Gaga aho fa ny Entana dia mihantona manerana ny seranam-piaramanidina, ary manoloana izany ny olona natory teo amin'ny tany, izay tena madio sy aina na aiza na aiza.
Amin'izao fotoana izao, Danemark no tonga lafatra
Na aiza na aiza ireo olona ireo namana sy miezaka manampy. Mazava ho azy, ny natiora, ny saha sy maitso, na dia eo aza ny volana janoary.
Ny rivotra madio sy tena mahafinaritra fa afaka lisitra ny maro hafa.
Masìna ianao, lazao ahy, ny olona. Sarotra rehefa tsy maintsy mifandray amin'ny olona tsy mitovy ny Mponina? Raha vao jerena, ny Mponina dia amin'ny namana ny olona, vonona foana ny hanampy sy ny hanontany raha mila izany. Fa raha efa nonina teto nandritra ny fotoana, dia ho hitanao fa tsy mora ny minamana amin'ny olona. Ny antony? Ny Mponina dia fianakaviana iray ny olona, ary izy hitoetra amin'ny fianakaviany eo amin'ny fiainana andavanandro.
Vahiny ihany no afaka ny ho tonga amin'ny alalan'ny fandaharana mialoha, indraindray mandritra ny iray volana, indraindray ho roa.
Izany dia azo atao ny manisa amin'ny Dane. Nianatra, ohatra, ao amin'ny dikanteny amin'ny Oniversite, ary izaho no ampiasaina ho izany, satria tsy misy mila ahy, sy ny asa hamaha izany dia tsy hanampy. Ny olona tsirairay ho an'ny tenany, ny mahery indrindra mbola velona. Taorian'ny taona maro tao Danemarka, afaka milaza aho fa ny Mponina tsy manana namana. Aho manana namana tsara, fa ny fiainana andavanandro aho tsy maintsy hiatrika ny Mponina. Angamba satria, fa ny toe-tsaina, kolontsaina sy ny zavatra mahaliana loatra ny hafa. Teo aloha teo, dia nisy ny fiteny, ankehitriny dia afaka milaza aho fa tsy izany no tena antony.
Fantatrao ve raha toa ka ianao ho akaiky kokoa ny Mponina? Iza izy ireo? Zavatra ny olona mamboly, nahita fianarana tsara, lehibe sy ny toerana tsara tarehy.
Nitranga dia kely ny stiffness sy ny. fianakaviana Tsara ny olona, foana ny fanampiana ao an-trano ary tsy menatra ny amin'izany. Voaomana tsara sy ny fitiavana sy ny fankaherezana. Fantatr'izy ireo ny fomba mba hikarakara azy ireo, fa izy mahafantatra ny lanjan'ny vola, ka tsy mieritreritra ny trano fisakafoanana volavolan-dalàna dia handoa ny vadiny. Bebe kokoa ny fandoroana ny fangatahana avy amin'ny mpifindra monina. Ahoana no fomba ny Mponina hitondra ny mpifindra-monina? Maro ny olona tonga avy amin'ny zavatra firenena? Misy be dia be ny mpifindra monina ao Danemarka, indrindra any Torkia, Iraka ary Iran, ary ny fihetsiky ny Mponina no tsy mazava. Rehefa miresaka amin'ny olona iray be taona, dia mety mahatsiaro ho tsy afa-po, izay no tena noho ny zava-misy fa ireo mpifindra monina tsy manana ny faniriana hianatra zavatra, fa tsy misy liana amin'ny zavatra kolontsaina sy ny zavatra fomba amam-panao.
Amin'ny ankapobeny, ny toe-tsaina afaka ny ho faritana ho toy ny"ny zava-dehibe indrindra, dia tsy ny mikasika ahy sy ny tsara", izay izy ireo ary tsy izay dia hevitra avy amin'ny vary ny sira.
Amiko manokana, tsy mbola nahatsapa misy ny fandavana ny hianatra bebe kokoa momba ny fahalianana sy ny faniriana mba hahita ny fomba dia miaina ao Danemarka.
Inona no sarotra ny mahazo ampiasaina ao Danemarka? Sarotra ny zatra ny tsy fisian'ny"antitra", taorian'ny valo ambin'ny folo taona an-dalambe tsy misy sisa, indrindra fa amin'ny andavanandro sy ny fety.
Ny toeram-pivarotana ao amin'ny valo ambin'ny folo no efa mihidy.
Ny mponina tia mandany ny hariva amin'ny fianakaviany, izay loatra homely. Efa namaky ny momba ny asa amin'ny marary ny ankizy. Lazao ny mpamaky ny fomba fiainana dia nandamina ireo kolejy, izy ireo mora ho anao. Raha ny marina, dia efa niara-niasa tamin'ny olon-dehibe izay autiste dia sarotra kokoa ny aretina. Izay niasa dia ny fampandrosoana foibe ho an'ny olona autiste teo amin'ny faha-valo ambin'ny folo. Telo marary isaky ny mpiasa. Izy ireo dia tena matihanina ary dia toy izany. Mba omeo ny marary fomba fijery manokana, ny andro tsirairay dia narafitra sy ny fampiasana ny farany teknika ho an'ny miara-miasa amin'ny tena ity aretina. Ny zavatra governemanta dia manome vola ho an'ny olona sembana, ary tsy tapaka ny vaovao farany sy manatsara ny toe-piainana ny olona sembana. Ohatra, tsy ela loatra, ny lalàna nolaniana eto, araka izay rehetra sembana ny olona dia tokony hanana ny an-trano. Maro amin'izy ireo no efa nahazo trano vaovao amin'ny fitaovana maoderina.
Izaho miasa ao amin'ny tena mahaliana foibe sy faly aho fa ity fahafahana.
Miara-miasa amin'ny ireo olona ireo dia mamolavola ny toetra amam-panahy. Dia nandeha ho any Danemark ny fianarana. Inona no zava-mahaliana no azonao lazaina momba ny rafi-panabeazana any Danemark? Any Danemarka, fampianarana maimai-poana ho an'ny Mponina, saingy misy ny sasany fahafahana ho antsika vao tonga. Ohatra, ny Oniversite, ny fanabeazana, izay aho nianatra nandritra ny taona iray ary nahazo ny anarana diplaoma ary maimaim-poana ny fampianarana ho an'ny vahiny.
Ny iray ihany no zavatra fanabeazana, ary raha toa ka tsy fianarana amin'ny zavatra teny am-pianarana, dia tsy afaka ny handeha any amin'ny Oniversite.
Mbola misy vatsim-pianarana maimaim-poana ny fampianarana ho an'ny vahiny, noho izany dia mila isa hevitra sy mampihatra ny fomba fanao izany dia natao tamin'ny teny anglisy. Ka misy fahafahana mahazo fanabeazana ao Danemarka, ny zava-dehibe indrindra dia ny faniriana. Ary ny fanontaniana farany: raha afaka mandeha indray, dia mandeha indray ny lalana rehetra, na dia misafidy ny firenena hafa? I danemarka no firenena, dia manana ny zavatra rehetra aho, te-avy amin'ny fiainana, ny fahafahana hanangana-janaka salama sy hankafy ny fiainana.
Raha mbola mieritreritra ny hifindra any amin'ny firenena hafa, manoro hevitra aho fa hianatra bebe kokoa momba ny kolontsaina, ny fiteny sy ny fisainana ao amin'ny firenena.
Tsy mora ny mampiditra ao anatin'ny firenena iray izay tsy tianao ny zavatra, na aiza ianao dia tsy afa-po amin'ny zavatra. Ira, ry malala, misaotra betsaka anao noho ny tantara sy ny asa. Tiako ianao mba hitandrina manao izay tianao. Miaina ao amin'ny toerana tena ny firenena, fa tsy hanadino ny momba ny havany. Azoko antoka fa ny mpamaky dia ho faly hanaraka ny faniriako.
Misaotra anareo indray.
Namana, aza adino ny misoratra anarana ny toerana ny vaovao farany, ary tsindrio ny"toy ny"bokotra raha tena toy izany. Aho maniry ny olona rehetra ny zoma mahafinaritra sy Talaky masoandro ny faran'ny herinandro.
Рвезе калык - кыл партнерский - Шем, пазарыште сингл увертара
free Chatroulette hihaona manambady maimaim-poana ny lahatsary amin'ny chat online hitsena anao Aho mitady tsindraindray fivoriana ny firaisana ara-nofo fampidirana lahatsary an-tserasera mametra ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny ankizivavy ny lahatsary amin'ny chat finday Mampiaraka ny lahatsary amin'ny chat online check